Family Soomaali ah oo wiil ugu dhashay Canada 00:00 habeenki new year ku dhashay – Somali Mail
Home WARARKA Somali News Family Soomaali ah oo wiil ugu dhashay Canada 00:00 habeenki new year ku dhashay
Family Soomaali ah oo wiil ugu dhashay Canada 00:00 habeenki new year ku dhashay
SM Staff 3 weeks ago
Sida ay qortay warbaahinta dowladda Canada ee CBC, canuggii ugu horreeyay ee ku dhashay magaalada Toronto, ilbiriqsigii ugu horreeyay ee 2020 wuxuu noqday Soomaali.
Wuxuu ku dhashay cisbitaalka Humber River Hospital ee magaalada, wuxuuna dhashay markii saacadu ay ahayd 00:00 (12:00) ee sannadka cusub.
Wiilkaa dhashay waxaa loo bixiyay, Amiir Deeq Maxamed. Maamulka Cisbitaalkaas waxay sheegeen in markii saacadda ay saqda dhexe ku istaagtay in canugaas uu soo baxay.
Waalidiinta cannugan, Deeq Maxamed Faarax iyo Ikraan Axmed Maxamed waxay Canada galeen shan sano ka hor iyagoo qaxooti ah.
In kastoo Amiir uu dhashay sannad cusub, saacad cusub iyo bilowga toban sano oo cusub, haddana wuxuu ku cusub yahay una cusub yahay qoyskiisa.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan cannugan dhalay,” ayuu yiri Deeq Maxamed Faarax.
“Dareenka aabe ahaan aan qabo wuxuu yahay in aan aad iyo aad ugu farxay. Farxaddeyda meesha ay gaartay ma aysan gaarin intii aan noolaa”, ayuu yiri Deeq.
Dhaqaatiirta waxay horey ugu sheegeen in cannugan, Amiir, uu dhalan doono 22-ka bishii December, sida uu Deeq u sheegay BBC Somali. “Inaga horey uma qorsheysan mana fileyn in cannuga uu dhalan doono sannadka cusub”.
Amiir markii la iclaamiyay in uu yahay cannugii ugu horreeyay ee Toronto ku dhashay ilbiriqsigii ugu horreeyay ee 2020, waxaa lagu soo dhoweeyay farxad, waxaana cisbitaalka tagay weriyayaal diyaar u ahaa in ay ka warramaan, sida ay qortay warbaahinta dalka Canada.
“Xitaa ma aynaan ogeyn in sannad cusub uu bilowday,” ayuu yiri Amiir aabihii, Deeq, kaas oo xilligii fasaxa isbitaalka kula noqnoqonayay Ikraan, xaaskiisa, ka dib markii uu dhallan waayay xilligii la filayay. Waxaa sidaa qoray mid ka mid ah warbaahinta Canada.
“Waa farxadda sannadka cusub. Ma filayn canug dhasha sannadka cusub,” ayaa laga soo xigtay.
Ikraan waxaa cisbitaalka la seexayay habeenkii Axadda ee xilliga canada, waxayna dhashay ilbiriqsigii ugu horreeyay ee Arbacadii, oo sannadka cusubka uu bilowday.
Deeq wuxuu Canada tagay sannadkii 2014-kii, xaaskiisa Ikraanna waxay ka dambeysay hal sano.
Wiilka yar ee Amiir wuxuu 50 ilbiriqsi ka horreeyay Aryan Walia, kaas oo ku dhashay cisbitaalka Credit Valley Hospital ee Mississauga.
Amiir oo noqday cannugii ugu horreeyay ee ku dhashay Toronto sannadka cusub
Previous article Hoos ka akhriso warsaxaafadeed UNKA ka soo saaray qaraxi ex kantrool afgooye
Next article UNICEF oo shaacisay Liiska caruurta dhashay habeenki 2020 ga
War-Saxaafadeed Madaxwayne Trump oo ka hadlay dilki sargaalki Iran sulaymani
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu u dilay hogaamiyihii sare ee milater…